We.com.mm - ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရော တန်လို့လား ? တန်တယ်လို့ရော ထင်လား ?
၂၀၁၉ မြန်မာ့နှစ်ကူးအတာသင်္ကြန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင်အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေက လျှောက်လမ်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်။ အမယ် .. လျှောက်လမ်းဆိုလို့ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဗျ .. လာတဲ့သူတွေ နေပူမှာစိုးလို့ ပုသိမ်ထီးလေးတွေ ခေါင်းပေါ်မှာ မိုးပေးထားတယ်။ စေတနာနဲ့ပေါ့ဗျာ။
အက်ဒမင် က သင်္ကြန်မှာ နောက်ဆုံးနေ့ပဲ လည်တာများတယ်ဗျ။ သူများတွေလို လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်တွေဘာတွေလည်းစိတ်မဝင်စား၊ မဏ္ဍပ်ထိုင်ရတာလည်း ဝါသနာမပါဘူး။ ကားနဲ့ရေပက်ခံထွက်ရတာကို သဘောကျတာ။ ရှေ့သုံးရက်မှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ အိမ်ထဲကနေ စောင့်ကြည့်တာများတယ်။ အခြေအနေကောင်းရင် အပြင်ထွက်တာပေါ့။ ပထမ နဲ့ ဒုတိယရက်က သိပ်ပြီး ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး။ ဒီနေ့လည်းကျရော အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ်က ရုပ်ဆိုးဆိုးမြင်ကွင်းတွေ့ရတယ်။
Pyae Phyo Naing ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်ပိုင်ရှင်က တင်ထားတာပါ။ ပုံကြည့်လိုက်တော့ ကန်ဘောင်လျှောက်လမ်းမှာ မိုးပေးထားတဲ့ အလှဆင်ပုသိမ်ထီးလေးတွေ တစ်လက်မှ မကျန်တော့ဘူးဗျ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ .. ကန်ဘောင်ပေါ်လမ်းလျှောက်လာကြတဲ့ အမျိုးကောင်းသားသမီးတစ်ချို့က ဆွဲချယူသွားတာတဲ့။ အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးနော် .. ဓာတ်ပုံကိုသေချာကြည့် .. ယူတဲ့သူတွေက ဘယ်လိုတွေဆိုတာ .. အဟုတ်ပြောတာ .. ဘုရားစူး .. ဆွဲချမရလို့ဒီအတိုင်းထားပစ်ခဲ့တဲ့ ထီးလေးတစ်လက်စ နှစ်လက်စပဲကျန်တယ်။
ပုံထဲမှာ မြင်ရတာကတော့ ဆွဲယူထားတဲ့ ထီးတွေကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတဲ့သူနဲ့ .. ထီးကို လက်ထဲမှာ လိပ်ပြီးကိုင်ထားတဲ့သူနဲ့ .. နေပူလို့ ထီးဆောင်းနေတဲ့သူနဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ .. အော် .. ထီးတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ထင်နေပုံရတယ် .. ဒါမှမဟုတ်လဲ public မှာ ချပြထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ ယူလို့ရတယ်ထင်ပုံပဲ .. ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတို့ပစ္စည်း ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါလား လို့တောင်တွေးမိတယ်။
public မှာဒီအတိုင်းချပြပြီး အလှဆင်ထားရုံနဲ့ အိမ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ထီးလို သွားချင်တဲ့အချိန်ကောက်ဆောင်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ နောက်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်း ဒီထီးတွေဟ အလှဆင်သက်သက်ဖြစ်ပြီး ဖြုတ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာလည်း သတိပေးထားသင့်တယ်။ ပြောမယ့်သာပြောတာပါ။ သတိပေးထားပြီဆိုမှ ပိုလုပ်ချင်ကြတာ လူတော်တော်များများပဲ။ မြန်မာဆိုတော့လေ .. ကိုယ့်လူမျိုးအကြောင်းကိုယ်သိတာပေါ့။
ရှက်ကြစမ်းပါဗျာ။ ဒီ အာတီကယ်ကို ဖတ်နေတဲ့အထဲမှာ ထီးကိုခပ်တည်တည်ဖြုတ်ယူသွားတဲ့ခင်ဗျားလည်းပါရင်ပါနေမယ်။ အဲ့ဒီကျမှ ပို့စ်အောက်မှာ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ကောင်တွေ ဘာညာနဲ့နင်ပဲငဆ ဝင်ပြီးဆဲဖို့၊ မန့်ဖို့မစဉ်းစားလေနဲ့။ ကိုယ်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်မသိပဲယူတာ သူခိုးပဲ ... ဘယ်သူတွေယူသွားတယ်၊ စည်းကမ်းပျက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး .. တခြားသူတွေလည်းမသိဘူး .. ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ကတော့သိတယ် .. အဲ့တော့ ခင်ဗျားတို့ ( ဓာတ်ပုံထဲက ထီးဖြုတ်တဲ့သူတိုင်း ) ဒီလိုသင်္ကြန်မျိုးနဲ့မတန်ဘူးဗျ။ ဗွက်ရေနဲ့ပက်ပြီး ဗွက်တောထဲမှာ လူးနေတဲ့ ဆင်ခြေဖုံးသင်္ကြန်မျိုးနဲ့ပဲတန်တယ်။
စည်းကမ်းရှိဖို့သူများကို ပြောချင်ရင် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းစည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်ဗျ။ နောက်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ mindset လေးလည်းမွေးပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ပေါက်လွန်းလို့ရေးလိုက်တာ .. စေတနာနဲ့ရေးတယ်မှတ်ပါ။
Source - Pyae Phyo Naing
( ယခုကဲ့သို့ အများပြည်သူ လိုက်နာသတိပြုစရာ ကျင့်ဝတ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဓာတ်ပုံများအတွက် ကို ပြည့်ဖြိုးနိုင် ကို WE Media မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း Pyae Phyo Naing လူမှုကွန်ယက် ( မူရင်း ) အကောင့်တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဝေမျှနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ )
8 months ago by Elsa
16 days ago by Cherry Mon